ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ နိုင်ငံများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်ရေး အခိုင်အမာတိုးတက်လာ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်တုန်းပြည်နယ် ကွမ်ကျိုးမြို့ရှိ ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်သူများအား မိတ်ဆက်ပေးနေသော Belt and Road Georgian Business House တည်ထောင်သူ Bekar Mikaberidze (ယာ) အား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမတစ်လျှောက်ရှိနိုင်ငံများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးသည် လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်အတွင်း သိသိသာသာ အားကောင်းလာခဲ့ကြောင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက မေ ၂၀ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
“ရှည်လျားနေသော ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) ကပ်ရောဂါနှင့် ရှုပ်ထွေးနေသော နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး အခြေအနေကြားမှ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ အဆိုပြုချက် တည်ဆောက်ရေးသည် ကြံ့ကြံ့ခံ တက်ကြွမှု အားကောင်းစွာဖြင့် ဆက်လက်သရုပ်ဖော်လျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တံခါးဖွင့်ဝါဒနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားနာလန်ထူမှုအတွင်းသို့ အားကောင်းသော တွန်းအား ဖြည့်တင်းပေးလျက်ရှိပါတယ်” ဟု စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး Sheng Qiuping က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမတစ်လျှောက်ရှိ နှစ်စဉ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှ, အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၀၄ ထရီလီယံမှ ၁.၈ ထရီလီယံအထိ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ၇၃ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း Sheng က ဆိုသည်။
ယခုကာလအတွင်း ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမတစ်လျှောက် နိုင်ငံများတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆၁.၃ ဘီလီယံရှိခဲ့ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံက ယင်းနိုင်ငံများတွင် ထူထောင်ထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွက်မှာ ၃၂,၀၀၀ ရှိပြီဖြစ်ကာ စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၁.၂ ဘီလီယံရှိကြောင်း Sheng က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ယင်းကာလ၌ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမတစ်လျှောက် နိုင်ငံများနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် အခြားနယ်ပယ်များ၌ အင်ဂျင်နီယားရင်း စီမံကိန်းများအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၀၈ ထရီလီယံခန့် တန်ဖိုးရှိသော စာချုပ်အသစ်များ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ယခုနှစ် ပထမလေးလအတွင်း ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမတစ်လျှောက် နိုင်ငံများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်မှာ ယမန်နှစ်ကထက် ၁၅.၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ယွမ် ၃.၉၇ ထရီလီယံ (ဒေါ်လာ ၅၈၈ ဘီလီယံခန့်) အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း အထွေထွေအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ လက်ထောက်ဌာနမှူး Wang Lingjun က ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, May 20 (Xinhua) — China’s economic and trade ties with countries along the Belt and Road have strengthened significantly over the past decade, an official said Friday.
“Despite the protracted COVID-19 pandemic and complicated international situation, the building of the Belt and Road Initiative continues to demonstrate strong resilience and vitality, injecting strong impetus into global openness and cooperation and world economic recovery,” Sheng Qiuping, vice minister of commerce, toldapress conference.
During this period, China’s direct investment in countries along the Belt and Road totaled 161.3 billion dollars, while 32,000 enterprises were established in China by these countries, withacombined investment of 71.2 billion dollars, Sheng added.
In the first four months of this year, China’s imports and exports with countries along the Belt and Road jumped 15.4 percent year on year to 3.97 trillion yuan (about 588 billion dollars), said Wang Lingjun, deputy head of the General Administration of Customs. ■
Photo : Bekar Mikaberidze (R), founder of Belt and Road Georgian Business House, introduces products to customers in Guangzhou, south China’s Guangdong Province, February 2022. (Xinhua)